डा. पवन र डा. गौरवको टिमले कटारी अस्पताललाई दिलायो, उत्कृष्ट हेल्थ अवार्डको उपाधी – गाउँपालिका
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १९, २०७६ समय: १३:२९:०३
गाईघाट । स्वास्थ्य खबर पत्रिकाले प्रदान गर्ने उत्कृष्ट अस्पतालको हेल्थ अवार्डको उपाधी कटारी अस्पताल, उदयपुरले हासिल गरेको छ। अस्पतालप्रति टुटिसकेको बिरामीको भरोसा र विश्वास फेरि जगाउन सफल भएकोमा सो अस्पताललाई अवार्ड दिइएको हो। अस्तव्यस्त अवस्थामा गुज्रिएको कटारी अस्पतालको अहिले कायाकल्प भएको छ। यो क्षेत्रका मात्रै होइन, सिन्धुली, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका बिरामी समेत यही अस्पतालमा उपचार गराउन आउँछन्। प्रदेश १ कै उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालमध्ये एक मानिन थालेको छ।
पछिल्ला केही महिनादेखि सुरक्षित प्रसूति सेवामा सिजेरियन सेक्सन समेत थपिएको छ। नवजात शिशुका लागि एसएनसियु सेवा सुरु भएको छ। अल्ट्रासाउन्ड सेवा अस्पतालमै छ। ओपिडी व्यवस्थित छ। बिरामी भर्ना गरेर उपचार गराउनेको संख्या बढेको छ। दिनमै डेढ–दुई सय बिरामीले सेवा पाउन थालेका छन्। जम्मा १५ बेडको अस्पताल भए पनि अहिले सेवा सुविधाका हिसाबले ५० बेडको स्तरमा उक्लिन थालेको छ। अस्पतालको कायाकल्पमा डा गौरव साह र डा पवनको साहको भूमिका उल्लेखनीय छ।
स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले नियमित रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको हेल्थ अवार्ड बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रदान गरिएको छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिका र नेपाल लाइभ डटकमको स्थापनाका अवसरमा अयोजित कार्यक्रममा विभिन्न ८ विधामा प्रदान गरिएको अवार्डबाट ९ जना सम्मानित भएका छन्। शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा सुरेन्द्र यादवले सम्मानितहरुलाई अवार्ड प्रदान गरेका छन्।
यस वर्ष उत्कृष्ट डाक्टरको अवार्ड गुल्मी अस्पताल तम्घासमा कार्यरत डा उत्तम पच्यालाई दिइएको छ। भने हेल्थ अवार्ड २०१९ का लागि उत्कृष्ट सामाजिक संस्था नेपाल नेत्रज्योति संघ ठहरिएको छ। हेल्थ अवार्ड २०१९ मा उत्कृष्ट जनस्वास्थ्यकर्मी कुलत विरोधी अभियन्ता वसन्तमान श्रेष्ठ भएका छन्।
उत्कृष्ट पारामेडिक्सको अवार्ड राजनकुमार थापालाई दिइएको छ।
उत्कृष्ट नर्स बाराको गञ्जभवानीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको नर्सिङ विभागको नेतृत्व गरिरहेकी निर्मला पण्डितलाई दिइएको छ। स्वास्थ्य स्वयंसेविकामा कलुदेवी खड्कालाई हेल्थ अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ।
आइओएमका दुई खम्बा मानिएका डा भीष्म प्रसाईं र डा हेमाङ्गमणि दीक्षितलाई यस पल्ट स्वास्थ्य खबरपत्रिकाले ‘लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड’ दिएको छ। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान (आइओएम) नेपालको मात्रै होइन, दक्षिण एसियामै राम्रो चिकित्सा अध्ययन केन्द्रका रूपमा सुपरिचित छ। यसको इतिहास धेरै पुरानो छैन। यसको जग हाल्ने मात्रै होइन, खम्बा बनेर काँध थाप्नेहरूमध्ये पर्छन् उनीहरू।